हाई स्कूल मा आफ्नो जीपीए गणना
aspose.com र aspose.cloud
अर्को पाठ्यक्रम थप्नुहोस्
अर्को सेमेस्टर थप्नुहोस्
उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् उत्तर पाना स्क्यान गर्नुहोस् ग्रेड क्यालकुलेटर ग्रेड प्रतिशत OMR पाना PDF अन्तिम ग्रेड Create Survey Scan Survey
Aspose.OMR GPA क्याल्कुलेटरले तपाइँलाई तपाइँको सेमेस्टर ग्रेडको आधारमा तपाइँको GPA गणना गर्न मद्दत गर्दछ। GPA विद्यालयमा तपाईको सफलताको सामान्य रूपमा प्रयोग हुने सूचक हो। GPA गणना गर्नाले तपाइँलाई कक्षामा तपाइँको स्थिति राम्रोसँग बुझ्न र यसलाई सुधार गर्न तपाइँको प्रयासहरू कहाँ निर्देशित गर्न आवश्यक छ भनेर देखाउन अनुमति दिनेछ। केवल आफ्नो पाठ्यक्रम ग्रेड र GPA मा यसको वजन चयन गर्नुहोस्। सबै गणनाहरू बिल्कुल निःशुल्क छन्।
GPA हरू प्रायः हाई स्कूल, स्नातक, र स्नातक विद्यार्थीहरूको लागि गणना गरिन्छ र सम्भावित रोजगारदाताहरू वा शैक्षिक संस्थाहरूले उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन र तुलना गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। सामान्य अभारित जीपीए0देखि 4.0 मा मापन गरिन्छ। एक नियमित अभारित GPA0देखि 4.0 को मापन मा मापन गरिन्छ। तपाईंको GPA भारित हुन सक्छ, जसको मतलब यो माथि जान्छ (सामान्यतया 5.0 सम्म, तर केही विद्यालयहरूमा अझ ठूलो स्केल छ)। ग्रेड पोइन्ट औसत विद्यालयमा तपाईको प्रगतिको संख्यात्मक सामान्य हो। यो एपले तपाईंलाई सेमेस्टरको लागि तपाईंको GPA गणना गर्न अनुमति दिनेछ।
यो नि: शुल्क अनुप्रयोग द्वारा प्रदान गरिएको Aspose.OMR
GPA कसरी गणना गर्ने
तपाइँ पाठ्यक्रमहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्
पाठ्यक्रमहरूको आवश्यक संख्या थप्नुहोस्। भ्रमबाट बच्नको लागि, तिनीहरूको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
आफ्नो पाठ्यक्रम ग्रेडहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्
थपिएका सबै पाठ्यक्रमहरूको लागि, आफ्नो ग्रेड र यसको क्रेडिट चयन गर्नुहोस्।
सेमेस्टरहरूको आवश्यक संख्या थप्नुहोस्
यदि तपाइँ धेरै पाठ्यक्रमहरूको लागि GPA प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई थप्नुहोस् र तिनीहरूको शैक्षिक प्रदर्शन डेटा भर्नुहोस्।
GPA प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईको GPA गणनाको नतिजा तल हेर्नुहोस्।
अन्तिम GPA के हो?
एक ग्रेड बिन्दु औसत समय संग पाठ्यक्रम मा कमाएको संचित अन्तिम ग्रेड को औसत मूल्य प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या हो। सामान्यतया GPA भनिन्छ, विद्यार्थीको ग्रेड पोइन्टको औसत सबै जम्मा भएका अन्तिम ग्रेडहरू जोडेर र त्यो अंकलाई दिइएको ग्रेडको सङ्ख्याद्वारा विभाजित गरेर गणना गरिन्छ।
गणनामा कुन ग्रेडिङ स्केल प्रयोग गरिन्छ?
मानक points पोइन्ट A / B / C / D / F स्केल पूर्वनिर्धारित द्वारा प्रयोग गरिन्छ। जहाँसम्म, तपाई १२ पोइन्ट स्केल चयन गर्न सक्नुहुनेछ जुन थप +/- संकेतहरू क्यालकुलेटरको माथि विस्तारित बटनमा क्लिक गरेर प्रयोग गर्दछ।
के म लिनक्स, म्याक ओएस, वा एन्ड्रोइडमा GPA गणना गर्न सक्छु?
GPA क्याल्कुलेटर अनलाइन काम गर्दछ र कुनै सफ्टवेयर स्थापना आवश्यक पर्दैन।
ग्रेड गणना गर्न मैले कुन ब्राउजरको प्रयोग गर्नुपर्छ?
तपाई कुनै पनि आधुनिक ब्राउजर को ग्रेड गणना गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि गुगल क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा, सफारी।
काम गर्दा हुने फाइदा हामी संग
छिटो र सजिलो GPA क्याल्कुलेटर
तपाईंको डाटा इनपुट गर्नुहोस् र तपाईंको ग्रेड गणना गर्नुहोस्। अधिक विस्तृत जानकारीको लागि ग्रेड चार्टलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्
कहीं बाट ग्रेड गणना गर्नुहोस्
यसले Windows, Mac, Android, र iOS सहित सबै प्लेटफर्महरूबाट काम गर्दछ। सबै फाइलहरू हाम्रो सर्भरहरूमा प्रशोधन गरिएका छन्। तपाइँको लागि कुनै प्लगइन वा सफ्टवेयर स्थापना आवश्यक छैन।
GPA क्याल्कुलेटर गुणस्तर
द्वारा संचालित Aspose.OMR. सबै फाइलहरू Aspose APIs प्रयोग गरी प्रशोधन गरिन्छ, 114 देशहरूमा धेरै Fortune 100 कम्पनीहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ।
तालिका संग तपाइँको ग्रेड तुलना गर्न को लागी तपाइँ यसलाई कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अनुप्रयोग रमाईलो छ?
हामीलाई तपाइँको अनुभव को बारे मा बताउनुहोस्
यो फेरि नदेखाउनुहोस्